Gaas oo xarigga ka jaray Jaamacadda Maakhir ee degmada Badhan - Halbeeg News
BADHAN (HALBEEG) – Madaxwaynaha Maamul Goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay xarigga ka jaray dhismaha Jaamacadda Maakhir oo laga hirgeliyey magaalada Badhan ee Xarunta Gobolka Sanaag.
Munaasabadda xarig-jarka waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiin ay kamid ahaayeen Guddoomiyaha Golaha wakiilkada Dowladda Puntland Axmed Cali Xaashi, Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada Puntland, maamulka Jaamacadda Maakhir, Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo marti sharaf kale.
Jaamacada Maakhir oo dhismaheedu ka kooban yahay ilaa 7 qaybood waxaa la bilaabay aasaasiddeeda sannadkii 2010, waxaana markeedii hore lagu bilaabay iskaa wax u qabso oo ay hormuud u ahaayeen bulshada ku dhaqan Badhan, sannadku markuu ahaa 2015 ayaa Maamulka Puntland oo taageero dhaqaale ka helaya Dowladda Kuweit wuxuu bilaabay mashruuca lagu dhisayo Jaamacada Maakhir.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo munaasabadda furitaanka ka hadlay ayaa sheegay inay wax lagu farxo tahay dadaal dheer kaddib in maanta si rasmi ah loo furay Jaamacadda Maakhir, isagoo xusay in mashruuca jaamacaddan lagu dhisay uu kamid yahay kuwa ugu qiimaha badan ee muddadii uu Puntland madaxweynaha ka ahaa la hirgeliyey.
Gaas ayaa xusay in xukuumaddiisu sii joogteyn doonto mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo Badhan iyo guud ahaan gobolka Sanaag, maadaama gobolku kamid yahay kuwa ugu muhiimsan Puntland.
Dowladda Soomaaliya iyo UNICEF oo ka wada hadlay ka hortagga askareynta caruurta